Premieres amin'ny sarimihetsika 6 hankafizinao amin'ny Aogositra | Bezzia
Premieres amin'ny sarimihetsika 6 hankafizinao amin'ny volana Aogositra
Maria vazquez | 22/07/2021 12:00 | kolontsaina
Toy ny isam-bolana dia manohy mitondra ny sasany amin'ny film premieres izay afaka ankafizinao ao an'efitrano atsy ho atsy. Satria vitsy ny drafitra toa manaitaitra antsika toy ny mandeha amin'ny sinema akaiky anao indrindra atoandro amin'ny volana Aogositra hijerena ny iray amin'ireo horonantsary ireo.
Ao amin'izy ireo dia misy kely ny zava-drehetra, manomboka amin'ny sarimihetsika antiherohero ka hatrany amin'ny filalaovana ara-tsaina, mandalo hatsikana, tantara an-tsehatra ary mety ho fangaro rehetra amin'ireny. Any Bezzia dia efa manana firaketana izay tena tadiavinay indrindra. Ary ianao? Iza amin'ireo no misarika ny sainao indrindra?
2 Toerana roa no mety
3 Ekipa mpamono tena
4 Fahagagana kely eo amin'ny Peckham St.
5 Fahavaratra telo
6 Ny fiainana dia fiainana
adiresy: M. Night Shyamalan
Mpilalao: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell
Ny fotoana dia 'mampihetsi-po' ara-tsaina tarihin'i M. Night Shyamalan, izay manaraka fianakaviana iray mandritra ny fotoana mijanona amin'ny morontsiraka paradisa. Ny toerana dia miorina amin'ny toerana lavitra ary manafina zavatra izay hanova ny fiainan'ny tsirairay avy. Rehefa mandeha ny fotoana dia samy hihalehibe sy hihalehibe izy ireo, ka hihena ny andaniny amin'izany andro izany.
Toerana roa no mety
adiresy: Paco Caballero
Mpilalao: Ernesto Alterio, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Anna Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Carlos Cuevas, Verónica Echegui, Miki Esparbé, Ricardo Gómez, María León, Melina Matthews, Ana Milan ...
Mpivady iray voafandrika tamin'ilay fahazarana, sakaizan'ny famoizam-po, tovolahy diso fanantenana tamin'ny fitiavany farany, zanak'olo-mpiray tam-po roa nisaraka hatramin'ny fahavaratra farany tao an-tanàna, vondron'olona te-hanandrana ... Nandritra ny alina iray, izy rehetra hiaina toe-javatra adala rehefa mankany a swingers club, habaka iray izay tsy misy ny fitsarana an-tendrony.
Ekipa mpamono tena
adiresy: James gunn
Mpilalao: Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman
Un vondrona olon-dratsy Voahidy ao amin'ny Belle Reve, fonja misy fiarovana ambony be indrindra izy ireo ary maty indrindra any Etazonia. Hialana eo dia hanao zavatra izy ireo, na dia hiditra ao amin'ny vondrona Task Force X aza, natokana hanatanterahana iraka hamono tena eo ambany baikon'ny Amanda Waller. Nentina nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika izy ireo nalefa tany amin'ny Nosy Corto Maltese, ala mikitroka feno fahavalo.
Fahagagana kely eo amin'ny Peckham St.
adiresy: Vesela Kazakova, Mina Mileva
Mpilalao: Irina Atanasova, Angel Genov, Orlin Asenov
Irina dia reny tokan-tena avy amin'ny Bolgara teraka tany London avy any Brexit mba hanandrana hiasa ho mpanao mari-trano. Leo ny toe-javatra nateraka tany amin'ny faritra mahantra indrindra noho ny fisondrotana sy ny vidin'ny fanofana be, manandrama manentana ny vondrom-piarahamoninao ny mpiara-monina handà ny rafitra miaraka. Na izany aza, miaina amin'ny fanampiana ara-bola izy ireo fa tsy mandray anjara amin'ny raharaha Irina.
adiresy: Sandra kogut
Mpilalao: Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes
Isaky ny volana Desambra eo anelanelan'ny Krismasy sy Taom-baovao, Edgar sy Marta dia mandray fankalazana ankohonana ao amin'ny tranony fahavaratra mahafinaritra eny amoron-dranomasina. Tamin'ny 2015 dia toa milamina daholo ny zava-drehetra, na eo aza ny antso an-tariby somary henjana sy ny vahinin'akanjo mitafy fatotra elektronika. Tamin'ny 2016 dia nofoanana tampoka ny fety fanao isan-taona. Inona no mitranga amin'ireo olona tsy hita maso izay miaina eo amin'ny boriborin'ireo mpanankarena rehefa mirodana ireny fiainana ireny? Amin'ny alàlan'ny fijerin'ny mpiasa iray sy raim-pianakaviana iray efa adino, hitantsika a sarin'i Brezila ankehitriny taloha kelin'ny loza tamin'ny taona 2018. Efa teo daholo ireo famantarana, saingy tsy hainay ny namaky azy ireo.
Ny fiainana dia fiainana
adiresy: Dani de la Torre
Mpilalao: Adrián Baena, Juan del Pozo, Raúl del Pozo, David Rodríguez, Javier Casellas
Fahavaratra 1985. Toy ny isan-taona dia mivory indray ao an-tanànany ny vondrona sakaiza iray. Saingy, ity taona ity dia tsy mitovy amin'ny ambiny. Fantatr'izy ireo bebe kokoa ny olan'ny tontolo tena izy sy ny fandrahonana ho afaka misaraka. Noho izany, ary mifikitra amin'ny fisakaizan'izy ireo, dia hanao a fitsangatsanganana mandritra ny alin'ny San Juan hahitana voninkazo majika izay, araka ny angano, maniry avo eny an-tendrombohitra ary mety hahatanteraka ny faniriana. Satria ny hany fanirian'izy ireo dia ny afaka miara-mitohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » kolontsaina » Premieres amin'ny sarimihetsika 6 hankafizinao amin'ny volana Aogositra
Tetika 4 hanadiovana fitaovam-panadiovana